Isikhokelo esipheleleyo sokuqonda indlela yokusebenzisa iBinance-Cazoo
Isikhokelo esipheleleyo sokuqonda indlela yokusebenzisa iBinance
Ikhaya » Ikhaya » Isikhokelo esipheleleyo sokuqonda indlela yokusebenzisa iBinance
tag: Binance, Urhwebo lwe-Crypto, Shintsha, Launchpad, Launchpool, Umyalelo wokulinganiselwa, Umyalelo wentengiso
Ixesha lokufunda: 16 imizuzu
Ngaba uzama ukudipha iinzwane zakho kwi-cryptography okokuqala okanye uyifumene eyimbali altcoin kwaye kufuneka uye eCoinbase ukuze uyifumane? Ukuba oku kwenzekile kuwe ngaphambili, unokukhangela i-Exchange ekunika ukufikelela kumakhulu altcoin kunye nokuthengisa ngababini. Utshintshiselwano olukunika ezinye iindlela zokufaka iidola, iiponti, i-euro ... mhlawumbi, kwaye mhlawumbi, mhlawumbi unomdla wokuba nethuba lokuthengisa lekusasa ukufumana inzala kwi-cryptocurrency yakho. Mhlawumbi ufuna nokufumana enye ikhadi le-Visa le-crypto. Mhlawumbi mhlawumbi ufuna ukuthatha inxaxheba kwenye yezi i-IEOs engaqondakaliyo (Inikelo yokuTshintshiselana yokuqala) umntu akuxelele ngayo .. ukuba ufunde kwenye indawo .. iindaba ezimnandi kuye wonke umntu! Kukho le phantom Exchange ebonelela ngayo yonke le nto ininzi. Ewe, linani elinye lotshintshiselwano nge-imali yedatha emhlabeni: Binance.
Ndibhala isikhokelo esichazayo sabaqalayo ekusebenziseni iBinance. Inyathelo nenyathelo, indlela yokuthenga i-Bitcoin ngemali yesiqhelo ye-fiat, siza kubona indlela yokurhweba kwi-Exchange kwaye sikunike ukujonga ngokubanzi ezinye izinto eziphambili zeBinance. Siza kujonga kwakhona indlela yokufumana isaphulelo semali yokurhweba engama-40% ukuze ukwazi ukugcina uninzi lwazo ze-crypto zizuza kwisipaji sakho kangangoko kunokwenzeka.
Apha kwi-cazoo injongo yam kukukhumbula ngentloko, ngokuyibhala, ulwazi endiluqokelela mihla le kwi-intanethi, kuba le ibisoloko iyindlela yam yokufunda. Ukuba ndiyibhala, ndiyayikhumbula. Endaweni yokwenza nje ngegama, ndiyenza apha, ukuze ndikwazi ukunceda omnye umntu ngamanqaku am. Ndiza kuthetha nawe ndithetha ndedwa, ngokungathi yidayari.
Njengoko wonke umntu esithi andinguye abacebisi bezemali mhlawumbi kufanelekile ukugubungela impundu yakho, kwaye ndiza kuthi nayo: Andinguye umcebisi wezezimaliAndikuxeleli ukuba ungayityala njani imali yakho kwaye ngekhe ndivume.
Ukulungele ukufunda yonke into malunga neBinance? IKHIWANE.
Ngaba i-Binance igubungela yonke i-crypto enomdla kum?
Ukubeka i-Crypto kwi-Binance
Indlela yokonga kwiikomishini
Ukunyusa kwiBinance Home Page
Indlela yokuthengisa kwiBinance?
Ezinye iinkonzo ezinikezelwayo?
Masithathe isishwankathelo seBinance njengenkampani? Emva kwayo yonke loo nto, licebo elilungileyo ukwazi ukuba ujongana nabani ngaphambi kokufaka imali kwiqonga labo.
Inqaku lokuqala ngokuchasene: akukho mntu uyazi ukuba iBinance izinze phi. Uninzi luthi iMalta, nangona kunjalo malunga nonyaka ophelileyo umlawuli waseMalta aphendule buqu esithi iBinance ayikho phantsi kolawulo lweMalta. Ngapha koko, ngaba yingxaki ngenene? Unomdla wokwazi apho iBitcoin isekwe khona? Ezi ziinkampani ze-cryptocurrency. Mhlawumbi kungcono ukuba ungabagwebi ngendlela oya kwenza ngayo kwinkampani yemveli. Emva kwayo yonke loo nto, iBinance yihlabathi liphela kwaye inabasebenzi kwiiofisi kwihlabathi liphela kumazwe angama-50.
Ngaba abafana beBinance bayazifihla nabo? Ndingathi hayi: phakathi kwabo ngumsunguli odumileyo kunye ne wizard yezezimali u-Changpeng Zhao, owaziwa njengo CZ, othatha inxaxheba kudliwanondlebe oluninzi, ubhala rhoqo kwi Twitter kwaye nokuba lusuku olunye luyavela kwiphepha elingaphandle leMagazini iForbes. Ngokweli phephancwadi, i-CZ ngumntu wesihlanu osisityebi kwi-cryptocurrency enexabiso elixabisekileyo eliqikelelwa kwi-1,9 yezigidigidi zeedola.
Changpeng Zhao kwiphepha leForbes
Yaziswa kwi-2017, emva kwe-ICO ephumeleleyo eyaphakamisa i-15 yezigidi zeedola apho abatyali-mali bafumana iithokheni ze-BNB ngokutshintshiselana, ngexabiso lokuqala elijikeleze iisenti ezili-10. Namhlanje i-BNB ijikeleza malunga ne-250 yeedola .. ayisiyimbuyekezo embi kutyalo-mali kwabo bathembela i-CZ kwasekuqaleni. I-Binance ivelise malunga ne-2019 yezigidi zeerandi kwinzuzo ngo-570, kwaye ekupheleni kuka-2020, i-Exchange yodwa irekhode phantse i-1 yezigidigidi zeerandi kwinzuzo. Kwakhona ngo-2020 uBinance unayo Ufumene umthengisi wamakhadi e-cryptographic SwayiphaIprojekthi ixabisa malunga ne-200 yezigidi zeedola. Kutshanje kufunyenwe i-cookmarketcap.com ye- $ 400 yezigidi. Olunye utyalomali lwesicwangciso kubandakanya utshintshiselwano lwe-FTX, Umqondiso wayo yenye yeendawo zokugcina eziphezulu ezingama-40 kwaye unexabiso elimalunga ne-2 yezigidi zeemali zentengiso.
Le bendisandula ukuyidwelisa ayisiyo uluhlu olupheleleyo lwayo yonke into iBinance etyale ngobuchule kuyo, kodwa ndicinga ukuba uyaqonda ukuba i-Binance Exchange ayisiyiyo neprojekthi eqhutywa kwenye indawo kwigumbi elingaphantsi. Hayi, lolona tshintsho luphumelele kakhulu kwiCrypto Exchange kwiplanethi, ekhokelwa ngumseki ophumeleleyo kwiminyaka emithathu enesiqingatha enokuthatha uninzi lwezigidigidi ebomini kwaye, nangaphezulu, uBinance akanazicwangciso zokucothisa ukwandiswa kwayo kangangokuba ukuba iinjongo zabo zazinobungozi ... banokuphulukana nokuninzi.
I-Binance ikwanerekhodi eqinisekisiweyo yokwenza into elungileyo-usenokuba sele uyazi ukuba bagqogqwa ngo-2019, apho phantse iipesenti ezi-2 zokubanjwa kweBitcoin kwi-Exchange zalahleka. Nangona kunjalo, uBinance ubabuyekeze ngokupheleleyo bonke abo bachaphazeleke kukuqhekeka ukuzoba imali kwingxowa-mali ye-SAFU (Ukhuseleko lweeasethi zeNgxowamali yaBasebenzisi) eyimbiza ye-cryptocurrency ebekelwe bucala ukugubungela izinto ezinje ngehacks.
Ndingathi sinesishwankathelo esihle. Masiqhubeke kwaye sibone ukuba ungafumanisa njani ukuba loo altcoin uyinqwenelayo idweliswe kuTshintshiselwano. Emva kwayo yonke loo nto, yeyiphi inqaku lokuseta iakhawunti ukuba into oyifunayo ayikho. Ngoku ndiza kukuxelela iqhinga lokuqonda ukuba loluphi na utshintshiselwano ngalo naluphi na ugcino lwedijithali.
Ukwenza oku ungaya kwicoinmarketcap.com, cofa kwindawo yokukhangela kwaye uchwetheze kwi-crypto onomdla kuyo. Kule meko ndisebenzise iAvalanche. Nje ukuba ucofe kwiAvalanche uza kubona iphepha leenkcukacha-manani ngothotho lweemetriki kunye neetshathi zamaxabiso. Ukuba ujonga ngaphezulu kwetshathi yamaxabiso uza kubona iqela lezinto onokukhetha kuzo kwaye enye yazo iya kuba njalo iqhosha leMarike. Cofa kulomfo umncinci kwaye kungekudala uza kubona lonke utshintsho olwahlukileyo oludweliswe kwiAvalanche kunye nezahlulo ezahlukeneyo ezikhoyo.
Masibone: I-AVAX inokuthengwa kwi-Binance nge-USDT, BTC, EUR, BUSD kunye ne-BNB. Gcina ukhumbula ukuba i-Binance ngokubanzi inevolumu ephezulu yokuthengisa phantse kuzo zonke i-cryptocurrensets ezixhaswayo, ke uninzi lwabantu abathengisa imali ekuthethwa ngayo benza njalo kwi-Binance. Nokuba yeyiphi na indlela, unokuphinda uyiphindaphinde loo ndlela ngayo nayiphi na imali yedatha yokufumanisa ukuba ungayithenga phi.
Ukujoyina iBinance kulula ngokwenene, akukho sizathu ekubhaleni inyathelo ngenyathelo ukuba wenzeni, ndiyathemba ukuba uya kusebenzisa iphasiwedi ekunzima ukuyithelekelela, kwaye uqiniseke ukuba usete ubunyani bezinto ezimbini usebenzisa isiQinisekisi sikaGoogle. Ukhuseleko aluze lube lukhulu kakhulu!
Ngoku sifaka imali ye-fiat, okt i-euro okanye iidola, kwi-Binance.
Phezulu kukuthenga iqhosha le-Thenga i-Crypto, thenga imali yedatha. Emva kokucofa kuyo uza kubona uluhlu lwazo zonke iimali zeefat ezahlukeneyo. Eyona nto ipholileyo malunga neBinance kukuba ezinye zeendlela zokufaka imali azinokhomishini, ngenxa yoko ufumana eyona mali yakho. Kuyo yonke iYurophu ukuhanjiswa kweebhanki, ngenxa yoko idiphozithi ye-SEPA, yi zero commissions , ngelixa ukhetha ukusebenzisa ikhadi lakho letyala ukwenza idiphozithi kwiBinance zombini iVisa kunye neMastercard, uya kuhlawuliswa i-1,8% nge-euro nganye. Andifuni ukuhlawula iikhomishini. Yilumkele into enye xa usebenzisa ugqithiso lwebhanki: kuya kufuneka usebenzise okufanayo ikhowudi yesalathiso yentlawulo, ikhowudi yesalathiso yentlawulo, oyibonayo kwiBinance. Ngale ndlela uBinance uyazi ukuba yi tuo idiphozithi kwaye iya kwabelwa tuo iakhawunti. Nje ukuba idiphozithi yakho yenziwe kwaye une-euro kwiakhawunti yakho yeBinance, ungabuyela kwithebhu ye-Buy Crypto kwaye ukhethe i-Cash Balance kwimenyu ehlayo.
Kwiphepha elilandelayo ungangena ukuba yeyiphi imali yedijithali ofuna ukuyithenga. I-Binance ikwabonisa ukuba ingakanani i-cryptocurrency oyakuyifumana .. ngokusisiseko yiyo yonke into ekhoyo kuyo.
Kuthekani ukuba sele unayo imali ye-imali yedatha kwaye ufuna ukujoyina le buffet ye-altcoin kutshintshiselwano?
Ukufaka i-crypto kwiakhawunti yakho, ngena kwiakhawunti yakho kwaye ucofe kwiqhosha lesipaji ngasekunene kwesikrini. Oku kuyakwandisa imenyu ehlayo kwaye sinomdla kwinto leyo Fiat kunye neSpot. Ngena apho. Uya kusiwa kwesi sikrini:
Emva koko nqakraza kwiqhosha idiphozithi, kwaye iphepha lokuqala eliza kuvela liya kuba liphepha lediphozithi yeBitcoin nedilesi yayo ye-BTC. Ukuba ufuna ukufaka i-BTC yile dilesi unokuyisebenzisa ukuthumela iBitcoin kwi-Binance. Nangona kunjalo unayo altcoin ufuna ukufaka endaweni yoko unokucofa ngokulula kwiqhosha leBitcoin ukwandisa imenyu ehlayo kwaye ukhangele i-crypto onomdla kuyo. Nanku umzekelo ndikhethe uCardano.
Sithe kukho iikhomishini zorhwebo: ngoku ndiza kuchaza indlela yokubabhatala kancinci. Ndikwanazo neengcebiso zokuba ungafumana phi Ukunyuswa kweBinance, kwaye ezinye azimelwe ziphoswe.
Iikhomishini zibonakala ngathi zisemthethweni, kodwa zihlala zongezwa .. kwaye xa zininzi kwixesha elide ziya kuzenza zivakale, ke mamela ngenyameko.
Okokuqala, kukho iindidi ezimbini zeentlawulo zokurhweba nge-imali yedatha, eyokuqala yile TIntlawulo eker esebenza xa ufaka iodolo kwixabiso lentengiso langoku. Okwesibini ngu Intlawulo yeMakishi, oyibhatalayo xa unikezela ngobonelelo ngokufaka izinto ezinje nge "limit order". Ndiqinisekile ukuba imali ebhatalwa iya kubhatalelwa imisebenzi oyifunayo, ke masiqwalasele kwezi.
Zombini iifizi zomThathi kunye noMenzi ziqala nge-0,1000% yekhomishini. Kukho iindlela ezininzi zokuqhubeka nokunciphisa ezo ntlawulo. Eyokuqala kukuthengisa ngaphezulu kwe-50 ye-Bitcoins ngeentsuku ezingama-30… ivolumu yokurhweba phantse ingafikeleleki. Ngenye indlela ungagcina ngaphezulu kwee-BNB ezingama-50 kwiakhawunti yakho ngentlawulo eyenziweyo enciphise i-0,0900%. I-50 BNB, okwangoku, imalunga ne- $ 11.100, ke isisixa semali.
Ukuba ufuna isaphulelo kwiMirhumo yabaThathi, kuyakufuneka utshintshise i-BTC engama-4500 ngeentsuku ezingama-30 okanye ube ne-1.000 BNB kwiakhawunti yakho. Ewe, ingaphezulu kwama-220.000 kwi-crypto BNB. Bangaphi abanayo yonke loo mali ecaleni?
Ke into endikucebisayo kukuba soloko ugcina i-BNB kwiakhawunti yakho kwaye usebenzise oko ukuhlawula iifizi zokurhweba. Yenza loo nto, kwaye uya kufumana ngokuzenzekelayo iipesenti ezingama-25 kwezo ntlawulo kwaye uhlawule kuphela i-0,0750%. kwaye ungonga nangaphezulu! Kuya kufuneka usebenzise le ikhonkco lam kunye nokudluliselwa, kwaye unokufumana enye i-20% kwiirhafu zorhwebo.
Ke ukuba uvula iakhawunti entsha yeBinance ngoku unokwenza izinto ezimbini ezilula: thenga i-BNB ukuhlawulela iifizi zokurhweba, kwaye ubhalise usebenzisa ikhonkco lam. Ukuba uyakwenza oko, ungaqala ukurhweba Ukunciphisa ngonaphakade iikhomishini ngama-40%, ukusuka ku-0,1000% ukuya ku-0,0600% kuphela.
Phantse akukho mntu uthetha malunga nelihle unyuselo kwiBinance ifunyenwe kwiphepha lasekhaya.
Uninzi lwezi zinto zonyuselweyo zijolise kwi-crypto-junkies, abo bangena ekuzileni ngaphandle kwe-crypto. Kodwa kusafanelekile ukuba udlule kuzo kwaye ubone ukuba ngaba kukho naziphi na ezinexabiso onomdla kuzo.
Umzekelo, ukuba ufuna ukurhweba nge-REEF crypto, bekukho ukhuphiswano lwe- $ 50.000 ye-REEF. Ngelixa la mabhaso ahlala esiya kwicala labarhwebi abomeleleyo, kukho into ye-lottery kuninzi lwezonyuselo: kolu khuphiswano lwezorhwebo ne-REEF crypto, abantu abangama-20 abanethamsanqa abathengisa ne-REEF bakhethwa ngokungacwangciswanga ukufumana i-500 njengesipho. ye-REEF. Balahle kude.
Kulungile, ngoku uyazi malunga neekomishini kunye nokwenyusa. Masiqale ukuthetha malunga nokuthengisa okwenyani kwiBinance.
Ke zininzi iindlela zorhwebo kwiBinance. Yeyiphi indlela elula? Njengesiqhelo, qiniseka ukuba ungene kwiakhawunti yakho yeBinance, emva koko ucofe ukuRhweba kwimenyu ephezulu yemenyu, kwaye ukhethe Guqula.
Uya kuza kwiscreen apho unokukhetha khona i-cryptocurrensets ofuna ukuyiguqula kwaye ukhethe isixa osifunayo.
Masenze ngathi sifuna ukuthengisa i-1 ETH kwi-Bitcoin.
Ngenisa nje ngokunqakraza kuHlelo lokuGuqulwa. Uya kubona ixabiso lesicatshulwa kunye ingqalelo, unemizuzwana embalwa ukwamkela elo xabiso. Nje ukuba ugqibile, ulugqibile urhwebo. Kulula kakhulu.
Icala elisezantsi kule ndlela kukuba kukho inani eliqingqiweyo lezibini zokurhweba kwaye ixhasa kuphela iiodolo zentengiso, oko kuthetha ukuba kufuneka uthembele kwixabiso lentengiso ngalo mzuzu kanye.
Ukuba ufuna ubhetyebhetye ngakumbi, ungayifumana kwipaneli yokuthengisa yeklasikhi: kwibar yokuhambisa phezulu, ukuThengisa kunye neClassic.
Uya kubona ke iscreen sokurhweba ngoluhlobo kwaye ucinga ukuba ucinga "Demethi. Ndayazi ukuba izakuba nzima". Thatha inyathelo ubuye umva! Kwaye ungothuki. Ndiyakuthembisa ayisiyonto inzima njengoko inokubonakala ngathi xa uyijonga kuqala.
Uncedo lokusebenzisa olu hlobo lojongano lokurhweba kukuba inokukuvumela ukuba ubeke iintlobo eziphambili zeodolo, ezinokugcina imali eninzi kunye nexesha elininzi.
Ukuqonda okwenzekayo ngale ndlela yokuthengisa makhe siyihlule ibe ngamacandelo.
Incwadi yoku-odola, irejista yeeodolo
Ngasekhohlo yiNcwadi yoku-odola, incwadi yoku-odola, Onke amanani abomvu phezulu athengisa iiodolo ze-cryptocurrency ethile kwaye zonke eziluhlaza zithengile iiodolo. Yonke loo miyalelo yenziwa ngamaxabiso ahlukeneyo. Ikholamu yasekhohlo kwincwadi yoku-odola lixabiso abantu ababeke ngalo ukuthenga okanye ukuthengisa iiodolo. Ikholamu ephakathi sisixa semali yedijithali efumanekayo kumaxabiso athile okuthengisa, kwaye ekugqibeleni sinekholamu elungileyo kwincwadi yoku-odola ebonisa ixabiso ledola elifumaneka kumaxabiso ahlukeneyo okuthengisa. Embindini wesikrini ungabona itshathi yamaxabiso.
Icebo lokucoca ulwelo phezulu ngexesha elibekiweyo
Ungayicoca ngokwamaxesha ahlukeneyo kwaye unokucofa kwitolo elincinci ukujonga izixhobo zetshathi, ukuba unomdla wokwenza uhlalutyo lobuchwephesha. Singathetha ngakumbi ngayo .
Vula izixhobo zetshathi apha ngezantsi
Ngasekunene kwiphaneli yokuthengisa unazo zonke iindidi ezahlukeneyo zokurhweba ezikhoyo kwiBinance. Ngomsebenzi wokukhangela ufumana i-cryptocurrency ofuna ukuyithengisa (urhwebo, Abantetho isisiNgesi bathi). Ngoku ndikhangela i-ticker ADA, yeCardano, kwaye njengoko ubona izibini ezahlukeneyo zorhwebo ziphuma. Ndiyazi, unemibuzo emibini.
Khangela itikiti ofuna ukuqala ukurhweba ngalo
Okokuqala, zithini ii-10x kunye ne-5x okanye iisimboli ezi-3x zithetha ecaleni kwezinye zezo ntengiso ze-ADA? Bathetha nje ukuba ungarhweba ngokunyusa ishumi okanye isihlanu okanye ezintathu ngalo Ukuthengiswa kwemida: kulapho uboleka khona imali ukuze urhwebe kunye nomgangatho, ukuze wandise umvuzo wakho (nelahleko).
Ngokukrakra, ngaba uyaqala? Ungakuhoyi ngokupheleleyo ukurhweba okuhlawulelweyo, vumela abathengisi abanamava ukuba bayisebenzise okanye bafunde ukuze babe ngumrhwebi onamava kwaye ungabuqonda ngokupheleleyo ubungozi.
Into yesibini ekusenokwenzeka ukuba uyazibuza ukuba kutheni ndikhangele i-ADA endaweni yokujonga iCardano. Ewe, ukuba uyiCzech Cardano, akukho nto iphumayo. Isizathu kukuba izibini zokurhweba zisebenzisa iinguqulelo ezimfutshane zamagama e-cryptocurrency, abizwa ngokuba ziitickers. Ngokwesiqhelo kukudityaniswa koonobumba abathathu okanye abane. Kwaye uyifumana njani itikiti le-crypto ofuna ukuyithenga? Yiya kwi-coinmarketcap kwaye ukhangele i-crypto onomdla kuyo. Iitikiti ziya kubonakala ngasekunene kwegama ledijithali yemali.
Ungayifumana itikiti kuyo nayiphi na imali yedatha. Masibuyele kwiphaneli yokuthengisa.
Urhwebo lweemarike, utshintshiselwano kwimarike
Kwikona esezantsi ekunene uneNtengiso yeNtengiso, okt urhwebo kwimarike. Kuphela kuphela kwezorhwebo zakutshanje ezenziwe ezibonisiweyo.
Kwaye okokugqibela, unecandelo lenjongo yokurhweba apho yonke imilingo yenzeka khona kwaye apho ufaka yonke imiyalelo ebalulekileyo.
Ngokuzenzekelayo le menyu yoku-odola iya kusetelwa kwii-Orders eziMiselweyo. Eyona ndlela yokuchaza ukuba yintoni kukusebenzisa umzekelo: masithi ngokwembono yakho ixabiso leBitcoin liphezulu kakhulu ngoku, kwaye ungavuya xa ungathenga xa ubuyela kuma-40.000. Ungabeka lo myalelo kwi-Binance-kuya kufuneka uchwetheze elo xabiso lama-40.000 kwaye ukhethe inani leBitcoin ofuna ukuyithenga. Ngokucinezela iqhosha lokuThenga oluhlaza loo myalelo uza kongezwa kwirejista yoku-odola. Ukuba ulele ngomso ebusuku kwaye ixabiso le-BTC lehla laya kwi-40.000 kwi-Binance, ke lo mda wokumisela uya kusebenza ngokuzenzekelayo kwaye uyakufumana i-BTC yakho ngeli xabiso liphantsi.
Ngaba uyayiqonda indlela osetyenziswa ngayo umda kwii-crypto zorhwebo? Mhlawumbi kuya kuba kufanelekile ukusebenzisa ezi ziMida zoMda endaweni yee-Orders zeNtengiso.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba umda wokuyalela usebenzisa iiMali zoMenzi njengekhomishini, hayi iMirhumo yokuThatha, enokuthi ngamanye amaxesha ibe yexabiso eliphantsi kwiBinance. Imida yee-Limit isebenza ngokufanayo kwicala lokuthengisa: Ndingabeka i-odolo yomda kwi-bitcoin enye ukuba ixabiso lifikelela kwi-100k- loo myalelo uya kuhlala apho ungenzi nto de kufikelelwe kwixabiso.
Ngokucacileyo, le miyalelo ihlala irhoxisiwe. Unokuseta ukuba iodolo kufuneka isebenze kuphela ixesha elithile kodwa le ngu isihloko senye inqaku.
Ii-Orders zeNtengiso zezona ntlobo zeodolo zilula: ungena ngokulula isixa onqwenela ukusithenga kwaye uthatha ixabiso lentengiso xa ubeka iodolo.
Ekuphela kwento esingathethi ngayo nge-Stop Limit Orders, andinakuyichaza kakuhle loo nto.
Umyalelo wokumisa umda
Kodwa ukuba ulumkile, kuya kufuneka ngoku wazi iziseko zendlela yokuthenga kunye nokuthengisa i-cryptocurrency usebenzisa ii-Orders zeNtengiso kunye neMiyalelo yokuNciphisa. Kukho enye into ekufuneka uyiphephe: ikamva.
Iziphumo ezivela kwixesha elizayo
Kuyingozi ngakumbi kunorhwebo lweMargin. Ixesha elizayo linokuba sisixhobo esiluncedo xa sisetyenziswa ngokufanelekileyo ngabarhwebi abaziingcali, kodwa ii-newbies ezinje ngawe ezifuna ukurhweba ngee-altcoins eziguqukayo nge-125x yokuphakamisa… ayingabo abantu abaxanduva. Ukuba uyanyanzelisa ukurhweba kunye nomgangatho, emva koko unokujonga iiTokethi eziVuselelweyo, ezikunika amandla okumodareyitha kwaye uphelise umngcipheko wokucinywa .. ke urhwebo olunesidima. Kufuneka nathi sithethe ngale nto ngomso.
Siye sabona ukusebenza okusisiseko kokuthengisa kwiBinance.
Nangona kunjalo le yenye yeenkonzo ezininzi ezibonelelweyo kule buffet ye-cryptocurrency enkulu, ke makhe sijonge ukuba yintoni enye ekhoyo kwimenyu.
Ngalo lonke olujikeleziso lwamaphepha ebhanki amatsha kwihlabathi liphela, nawe unomdla wokuhleka kwingxowa-mali yakho. Ewe, i-Binance Earn ikunika amandla okufumana inzala ejikeleze i-6% APY (ipesenti yonyaka isivuno) kwezinye iimali ze-crypto.
Umvuzo weBinance-Imigaqo eguqukayo
Unokukhetha ukukhetha ugcino oluguquguqukayo, okuthetha ukuba unokufikelela kwi-crypto yakho nangaliphi na ixesha, okanye ungayibamba loo crypto ixesha elinokufikelela kwiintsuku ezingama-90 ukuze ufumane inzala ephezulu kancinci.
Umvuzo weBinance-iMigqaliselo eMiselweyo
Iimveliso zokonga ezinobungozi obuphezulu ziyafumaneka kumaxabiso aphezulu nangaphezulu, kodwa gcinani engqondweni ukuba uthatha umngcipheko wokufumana umvuzo ongaphezulu.
Umvuzo weBinance-Imveliso ephezulu yomngcipheko
Isizathu sokuba ezi mveliso zivelisa umdla zithandwe kakhulu kukuba abantu abaninzi bagcina ii-cryptocurrensets kwisipaji kwaye bahlala apho bengenzi nto. Endaweni yokuba abanye abantu bathathe isabelo sokubamba kwabo ukuze bafumane inzala ngelixa belinde amaxabiso e-cryptocurrency ukuba aqhume kwaye babethe ixabiso abalifunayo.
Enye imveliso eshushu ebonelelwa nguBinance yikhadi labo le-visa ye-crypto.
Ikhadi lokuTsalwa kweBinance Visa Crypto
Kodwa kutheni ungafuna enye?
Masijongane nayo, ukuguqula i-cryptocurrensets kunye nokurhoxisa loo mali kwibhanki yakho kunokuba yingxaki. Kwakhona, kulungile ukucinga ngokuzinika into, ukuba ayizange ihambe kakubi .. ke ukuba uyakhathala kwaye ufuna ukuchitha i-crypto yakho naphi na apho iVisa yamkelwe khona, ikhadi le-Crypto yile nto uyifunayo. Ikhadi liyafumaneka kumawakawaka amazwe kwihlabathi liphela. Elo khadi liBinance elimnyama lisimahla, kwaye iBinance ngokwayo ayihlawulisi nayiphi na intlawulo okanye intlawulo yolawulo. Elo khadi likwadibanisa neakhawunti yakho yeBinance Exchange! Kwaye, unokunyuka ukuya kuthi ga kwi-8% yokubuyisa imali xa usebenzisa elo khadi ewe, ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo lokuba ukwazi ukufumana ikhadi le-binance emva koko unokufuna ukulibamba ngoku.
Andikukhuthazi ukuba wenze oku, kodwa iBinance ikwabonelela ngemalimboleko yecrypto eyabanjwayo ukuba uyafuna.
Imali mboleko zeCrypto
Eyona ndlela ithe ngqo yokuyichaza kukuba kufana nokufumana imali mboleko kwindawo yokuthenga, apho ubonelela ngesiqinisekiso ngendlela yento enexabiso (njengewotshi, umzekelo) kwaye ufumane imali mboleko. Kwi-Binance ungafumana imali-mboleko yokuqala kwiXabiso (LTV) ye-55% kwaye uya kucelwa ukuba ungeze ezinye iimali zokukhusela ukukhusela imali-mboleko yakho ukuba i-LTV inyukele kwi-75%. Ukuba i-LTV ihlasela iipesenti ezingama-83, isibambiso sakho se-crypto siya kuthengiswa nguBinance ukukhusela imali mboleko .. ngokuqinisekileyo awufuni ukuba yenzeke.
Into eyenziwa ngabantu abaninzi ngezi mboleko kukuthenga ii-cryptocurrensets ezingaphezulu eziyindlela yokuphakamisa, kodwa ke, ukuba unomdla, ngesi sixhobo unganikezela ngee-cryptocurrensets ezihambelanayo kwaye uboleke iiponti zeerandi okanye iidola zaseMelika .. ukuba uyafuna.
Emva koko kukho into eyaziwa ngokuba yi-Binance Liquid Swap yenye yeendlela onokuthi uvelise ngayo imali engenziweyo nge-cryptocurrencies kwaye unokufumana imbuyekezo ephezulu. Gcina ukhumbula ukuba ithatha umngcipheko!
Ukutshintshwa kweBiance Liquid
Enye into ebonelelwa nguBinance yiLaunchpool yayo. Ngokusisiseko le mveliso ivumela abasebenzisi be-Biannce ukuba bavelise amathokheni njengomvuzo wokutshintshela ii-cryptocurrensets ezithile. Ezinye ii-cryptocurrensets ezinje ngeLitentry azikaze zithengiswe esidlangalaleni okanye uMrhumo woTshintshiselwano lokuQala, kwaye endaweni yoko zahambisa isahlulo somqondiso wokuqala usebenzisa iLaunchpool.
Imveliso yokugqibela endifuna ukuthetha nawe ngayo yiBinance Launchpad: liqonga elikhethekileyo likaBinance lokumilisela iiprojekthi ze-crypto.
Kulapho abafana abafana nathi banokufumana ulwabiwo lwethokheni ngexabiso, ngexabiso elihle kakhulu .. kwiiprojekthi ezithandwayo kwiLaunchpad ulwabiwo lwethokheni lwenziwa ngenkqubo yeLotto -ukuyibeka ngokulula, ngakumbi iingqekembe ze-BNB onazo kwiakhawunti yakho I-Binance, amatikiti e-lottery awufumanayo. Ukuba uphumelele ilotto, unelungelo lokuthenga i-altcoin ethile ngexabiso elimiselweyo. Ke, ukuba ukhetha iprojekthi eqinileyo kwaye unethamsanqa elaneleyo lokufumana ulwabiwo, amathuba okuba uhambe kakuhle xa urhwebo lwasesidlangalaleni luphila kwiBinance. Kungenxa yoko le nto phantse zonke iiprojekthi ezazisungulwe kwiphetshana lokumiliselwa ziye zabhaliswa ngokungapheliyo ngabantu abaninzi, isizathu sokuba le nkqubo ye-lottery iphunyezwe: yayililinge le-binance lokwenza olu lwabiwo lube lolulungileyo nolungileyo. Akunjalo nokuba i-binance ikwabelana ngeziNikelo zokuTshintshisiswa kokuQala kunye nolunye utshintsho, ke ukuba ubona iprojekthi kwiphedi yokuqalisa elo thuba liya kuba lilodwa kwiBinance. Kufanelekile ukubhabha ngaphezulu kwale pad yokwazisa ukubona ukuba akukho nto ihlekisayo ...
Siphantse sagqiba. Amagama nje ambalwa okuthetha ngezixhobo ezithile zemfundo uBinance azibonelela simahla.
Eyokuqala yiBinance Academy, ebonelela ngezixhobo ezithile ezimnandi kwii-cryptocurrensets ezahlukileyo kunye nezihloko ezinxulumene ne-cryptocurrensets. Okwesibini yinto engaphantsi kakhulu: yiyo UBhanance Research. Apha unokufumana izixhobo ezinxulumene neeprojekthi nazo zonke iintlobo zamanani kunye neegrafu, ezijongana nokudweliswa konikezelo lweethokheni zeprojekthi oyinikiweyo, ulwabiwo lwethokheni Lulwabiwo lwabo, ishedyuli yokukhutshwa kokuhanjiswa kunye nokunye okuninzi. Jonga, kulula kakhulu ukuba ufunde.
Isikhokelo siphelile ... kodwa inyani kukuba ndisandula ukukrwela umphezulu kwaye iBinance ibonelela ngokungaphezulu kunokuba inokuxelela inqaku elinye.
Ukuba unomdla wokuqalisa kwi-Binance, ungalibali ukuba iipesenti ezingama-20 zerhafu yokurhweba ngokusayina simahla ngekhonkco lokudlulisela.
Inqaku elilandelayoUvelisa njani ukulima ngokuTshintshisa uLwelo kwiBinance